Kooxda Manchester United Oo Kaalinta Afaraad Ku Gashay Iyo Qaladaad VAR Soo Saartay Kulankii Kooxda Chelsea? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Kooxda Manchester United ayaa guul weyn ka gaartay kooxda Chelsea oo marti loogu ahaa Stamford Bridge ka dib markii ay ku suuldaareen labo gool iyo waxba iyadoo muuqaal caawiyaha garsooraha ee VAR uu gaaray go’aamo muran badan laga keenay.
Qaab ciyaareed la jecleysto ma aysan soo bandhigin labada kooxood inta badan qeybtii hore ee ciyaarta laakiin Manchester United ayaa ku soo xirtay gool aad u qurux badan oo uu u dhaliyay Anthony Martail.
10 daqiiqo markii ay socotay ciyaarta waxaa Chelsea ku habsatay musiibo markii uu ka dhaawacmay N’Golo Kante oo ay qasab noqotay in la bedelo.
VAR ayaa iyadana muran dhalisay daqiiqadii 22aad markii kabtanka Man United Harry Maguire uu ka badbaaday inuu kaar cas ah qaato. Maguire oo dhulka yaala ayaa lugta waxa uu xiniinyaha uga dhuftay Batshuayi oo iska ilaalinaya inuu ku duldhaco, laakiin VAR ayaa dib u eegtay islamarkaana go’aansatay inuusan casaan aheyn.
Muuqaal caawiyaha garsooraha ayaa lagu eedeeyay in xukunkooda uusan joogta aheyn madaama qalad la mid ah oo uu weeraryahanka Tottenham Son Heung-min uu ku sameeyay daafaca Chelsea Rudiger casaan toos ah lagu siiyay xilli ciyaareedkan.
Ka hor inta aan la aadin waqtigii nasashada ayay Manchester United heshay gool aad u qurux badan oo uu ka soo shaqeeyay Wan-Bissaka kaasoo gedgediyay William ka hor inta uusan karoos u qaadin Anthony Martial oo isna madax ku dhaliyay kubada.
Anthony Martial ayaa dhaliyay afar gool seddexdii kulan ee ugu danbeysay ee uu ka horyimid Chelsea horyaalka Premier League.
Daqiiqadii 55aad ayay Chelsea soo taabatay shabaqa markii Zouma u dhaliyay koorno la soo qaaday laakiin goolka waa la diiday taasoo iyadana noqotay go’aan kale oo muran weyn dhaliyay.
VAR ayaa ku sheegtay sababta goolka loo diiday inay aheyd Azpilicueta oo ku dhacay daafaca da’da yar ee Man United Williams laakiin Azpilicueta waxaa soo riixay oo ku qasbay inuu Williams ku dhacdo Fred.
Daqiiqadii 64aad saxiixa cusub ee Man United Fernandes ayaa ku dhawaaday inuu shabaqa soo taabto markii laad xor ah oo uu soo qaaday ay birta ku dhacday.
Laakiin Manchester United ayaa sii dheereysatay hogaanka markii koorno uu soo qaaday Fred uu madax ku dhaliyay kabtanka kooxda Maguire kaasoo ciyaarta ka dhigay 2-0.
Harry Maguire ayaa u dhaliyay Manchester United goolkiisii ugu horeysay ee horyaalka Premier League. Waana goolkiisii ugu horeysay ee ka dhaliyo horyaalka tan iyo bishii Janaayo 2019 markaasoo uu ka dhaliyay Liverpool.
Chelsea ayaa gool kale dhalisay daqiiqadii 77aad markii uu shabaqa soo taabtay Olivier Giroud oo bedel ciyaarta ku soo galay laakiin goolkaas isna waa la diiday madaama qeyb ka mid ah cagta Giroud ay offside aheyd markii kubada uu soo qaadayay Mason Mount.
Daqiiqadii 88aad Chelsea ayaa ku dhawaatay inay hesho gool markii laad xor ah uu soo qaaday Mason Mount oo uu birta garaacay taasoo keentay in De Gea oo damacsanaa inuu badbaadiyo inuu garabka ku dhufsado birta inkastoo uu ka badbaaday dhaawac halis ah.
Saxiixa Man United Ighalo ayaa daqiiqadii 90aad bedel ku soo galay ciyaarta isagoo bedelay Martial waana kulankiisii 200aad ee uu saftay horyaalka, iyadoo Ighalo uu noqday xiddigii ugu horeeyay ee Nigeria ee u safta Man United.
Ighalo ayaana fursad halis ah waxaa ka badbaadiyay goolhaye Caballero daqiiqadihii ugu danbeeyay ee ciyaarta.
Waxay ciyaarta ku soo dhamaatay 2-0 oo ay Man United ku garaacday Chelsea iyadoo tartanka kaalinta afaraad uu sii kululaaday.